मुक्ति पाउन मैले के गर्नुपर्छ? – Word of Truth, Nepal
पहिलो, हामीलाई यो जान्न खाँचो छ — परमेश्‍वर को हुनुहुन्छ? परमेश्‍वको वचन बाइबलमा यसरी लेखिएको छ,
मूर्खले मन-मनमा भनेको छ: “परमेश्वर छैन।” तिनीहरु भ्रष्ट भएका छन्, तिनीहरुले घिनलाग्दा कामहरु गरेका छन्; असल गर्न कोही छैन। बुझ्ने कोही छ कि? परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ कि? सो हेर्न परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानहरुलाई हेर्नुभयो। तिनीहरु सबै एकातिर लागेका छन्; तिनीहरु सबै एकसाथ फोहोरी भएका छन्; असल गर्ने कोही छैन; अहँ, एउटै पनि छैन। (भजनसंग्रग १४:१-३)। सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्‍वरको महिमारहित हुनगएका छन्। धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन (रोमी ३:२३,१०)।
बाइबलले बताउँछ, मेरो हृदय दुष्ट छ…
प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, मेरो हृदय खराब छ…
तसर्थ, म सारा संसारको न्यायकर्ता परमेश्‍वरका सामु दोषी छु र पवित्र परमेश्वरको क्रोध र दण्डको आज्ञामुनि छु…
हरेक मुख चुप रहोस् र सारा संसार परमेश्‍वरको सामु दोषी ठहरियोस् (रोमी ३:१९)। किनकि सत्यलाई अधर्ममा दबाइराख्‍ने मानिसहरूका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ… किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई झैं महिमा दिएनन्, न धन्यवादी भए; तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकम्मा भए, तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। बुद्धिमान् छौं भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने, र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाश हुने मानिस, चराचुरुङ्गीहरू, चारखुट्टे जनावरहरू र घस्रिने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झूटसँग साटे, र सृष्टिकर्ताको सट्टामा, जो साँच्चै सदासर्वदा धन्य हुनुहुन्छ, तिनीहरूले सृष्टिको पूजा र सेवा गरे (रोमी १:१८, २१,२२,२३,२५)। यसकारण हे न्याय गर्ने मानिस, तिमी जोसुकै भए तापनि तिम्रो कुनै बहाना छैन; किनभने जुन कुरामा तिमी अरूको न्याय गर्दछौ, त्यही कुरामा तिमीले आफैलाई दोषी ठहराउँदछौ; किनकि तिमी न्याय गर्ने आफैले ती कुराहरू गर्दछौ (रोमी २:१)। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ, ऊ दोषी ठहरिँदैन; तर जसले विश्वास गर्दैन, त्यो पहिल्यै दोषी ठहरिसकेको हुन्छ; किनकि त्यसले परमेश्वरका एक मात्र जन्माइएको पुत्रको नाममा विश्वास गरेको छैन। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ, ऊसँग अनन्त जीवन हुन्छ; अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन, त्यसले जीवन देख्‍नेछैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ (यूहन्ना ३:१८,३६)।
“अनि उनले पुत्र जन्माउनेछन्, र तिमीले उहाँको नाम ‘येशू’ राख्‍नू, किनभने उहाँले आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट मुक्त गर्नुहुनेछ।” अब भविष्यवक्ताद्वारा प्रभुले भन्नुभएको कुरा पूरा होओस् भनेर यो सब भएको थियो: ‘हेर, कन्या गर्भवती हुनेछन् र एउटा पुत्र जन्माउनेछन्, अनि तिनीहरूले उहाँको नाम “इम्मानुएल” राख्‍नेछन्’ जसको अर्थ हो, ‘परमेश्वर हामीसित’ (मत्ती १:२१-२३)। किनभने मानिसका पुत्र हराएकोलाई खोज्न र मुक्त गर्न आएका हुन् (लूका १९:१०)। यो विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहणयोग्य वचन हो — ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई मुक्ति दिनालाई संसारमा आउनुभयो (१ तिमोथी १:१५)।
प्रभु येशू ख्रीष्ट, जो अनादिदेखिका परमेश्वर र सारा थोकका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, मेरोसट्टामा मेरो निम्ति क्रूसमा मर्नुभयो जुन मृत्युद्वारा उहाँले मैले भोग्नुपर्ने मृत्यु-दण्ड पूरै तिरिदिनुभयो।
“मुक्ति पाउनालाई मैले के गर्नुपर्छ?” अनि उनीहरूले भने: “प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस्, र तपाईंले मुक्ति पाउनुहुनेछ” (प्रेरित १६:३०-३१)। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो – उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस् (यूहन्ना ३:१६)। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ, ऊ दोषी ठहरिँदैन; तर जसले विश्वास गर्दैन, त्यो पहिल्यै दोषी ठहरिसकेको हुन्छ; किनकि त्यसले परमेश्वरका एक मात्र जन्माइएको पुत्रको नाममा विश्वास गरेको छैन (यूहन्ना ३:१८)। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ, ऊसँग अनन्त जीवन हुन्छ; अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन, त्यसले जीवन देख्‍नेछैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ (यूहन्ना ३:३६)।
अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “जीवनको रोटी म नै हुँ। जो मकहाँ आउँछ, ऊ कहिल्यै भोकाउनेछैन; अनि जसले ममाथि विश्वास गर्छ, ऊ कहिल्यै तिर्खाउनेछैन…अनि जो मकहाँ आउँछ, उसलाई म कुनै रीतिले अफाल्नेछैनँ” (यूहन्ना ६:३५,३७)।
१) प्रभु येशू ख्रीष्ट नै एक मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँबिना अरू कसैमा पनि मुक्ति छैन:
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-03-01 13:38:422020-10-25 13:34:52मुक्ति पाउन मैले के गर्नुपर्छ?
भूकम्पमा पनि आशाके म एउटा साँचो विश्वासी हुँ ...